Archive du 20161112
Lalao Ravalomanana Hosoloina PDS ?
Miharihary ny antsojay sy ny politika maloto entina hamotehana ny ben�ny tan�na Lalao Ravalomanana.
Zotram-pifidianana Hanao fandravonan-kevitra ny CENI
Miditra amin�ny dingana farany ny fandrafetana ny paikadim-pirenena ho fanabeazana sy ho fanentanana ara-pifidianana sy ny paikadin-tseraseran�ny CENI taorian�ny fanangonana ny hevitr�ireo mpisehatra amin�ny fifidianana teny ifotony.
Antoko HVM Miomana amin�ny fifidianana
Handray anjara amin�ireo sokajim-pifidianana rehetra eto Madagasikara ny Hery Vaovao ho an�i Madagasikara, hoy ny filoha lefitra nasionaly Jaobarison teny amin�ny foiben-toerany Antanimena omaly.
Fandraisana ny frankofonia Hanao asa fanadiovana ny Faritra Analamanga
Hanentana ny mponina sy hanao asa fanadiovana goavana eto an-drenivohitra ny Faritra Analamanga tarihin-dRakotonanahary Ndranto hanomboka anio sabotsy ho fandraisana am-pilaminana ny frankofonia izay hotanterahina eto amintsika ny 21 ka hatramin�ny 27 novambra ho avy izao.
Salama ve ry Jean a ? Tena malaza mihitsy ianareo tamin�ilay fampisehoana teny Analakely a ! Dia tena mbola nibaribary indray mantsy ny maha maivan-doha anareo a ! Sa kosa manimanina ny tongolon�i Egipta
Famoronana hetra Ny fitokisan�ny vahoaka no vahaolana
Mbola adihevitra tsy mety tapitra eto amin�ny firenena ilay resaka fampandoavana hetra 5000Ar isan-taona ny olona 21-60 taona.
Seranam-piaramanidina Miverina amin�ny �Air Mad� ny fikojakojana
Noho ny fandraisantsika ny fihaonana an-tampon�ny Frankofonia ve sa tena fitsinjovana marina ny hoavin�ny orinasa sy ireo mpiasan�ny Air Madagascar no nahatonga ny fanjakana Malagasy tamin�ny alalan�ny
Fanomezana rano fisotro madio Nanampy teny Fenoarivo ny mpianatry ny INSCAE
Tanteraka ilay fomba fiteny hoe ny tanora no hoavin�ny firenena, raha dinihina amin�ny zava-bitan�ireo tanora 7 mianadahy mpianatra ao amin�ny INSCAE, dia Randimbison Malala,
MOTO SCOOTER, SARETY, POSY Tsy misy mahazo mivezivezy mandritra ny Frankofonia
Ho hentitra ny fitandroana ny fandriampahalemana sy ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra sy ny manodidina mandritra ny herinandro
Sahia manao dingana lehibe !
Lesona ho an�izao tontolo izao ny fifidianana sy ny vokany tany Etazonia.